သရဲ မကြောက်သူများ | AnZarTone
Mobile Apps (apk)
ကိုယ်တိုင်ရေး စာနှင့် ကဗျာများ
Online Website Seller
by AnZarTone သရဲ မကြောက်သူများ
ဦးတင်ဆောင် ဆိုတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက် ရှိတယ်။ သူက ကျုပ်နဲ့ အမျိုးစပ်မယ်ဆိုရင် ကျုပ် အမေရဲ့ အဖေ၊ ကျုပ်အဖိုးပေါ့ဗျာ။ အဲဒီ ကျုပ်အဖိုးရဲ့ အကို ဖြစ်သူပါ …. ကျုပ်နဲ့ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း တော်တုံးတော့ မသိဘူး။ အမျိုးတော့ တော်တယ်။ ကျုပ်ကတော့ အဲဒီလူကြီးကို ဘကြီးအရွယ်မို့ ဘကြီးတင်ဆောင်လို့ပဲ ခေါ်သဗျ။
အဲဒီ လူကြီးက သရဲတစ္ဆေ ဆိုတာကို နည်းနည်းမှ ကြောက်တတ်တဲ့လူ မဟုတ်ဘူး။ သူ မကြောက်တတ်ပုံကို ကျုပ်နည်းနည်း ပြောပြမယ်။
တစ်ခါကပေါ့ …။ ဘကြီးတင်ဆောင် တစ်ယောက် လွယ်အိတ်ကြီး တစ်လုံးလွယ်ပြီး တောထဲကို ဟင်းစားရှာဆိုပြီး ထွက်သွားခဲ့တယ်။ ဟင်းစားဆိုတာက အသားကောင် သွားရှာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တောထဲကို ဟင်းချက်စားလို့ရတဲ့ အသီးအရွက်တွေ သွားရှာပြီး ခူးယူတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလို ဟင်းစားရှာ သွားလိုက်တာ နေ့ခင်းကို ရောက်သွားပါလေရော။ ကျုပ်တို့ ရွာဘက်မှာတော့ မိုးတွင်းမှ ဟင်းစားက ပေါတာ။ ကျန်တဲ့ အချိန်တွေမှာတော့ ရှားသဗျ။ ဒါကြောင့် ဟိုပတ်ရှာ၊ ဒီပတ်ရှာရင်းနဲ့ ဘကြီးတင်ဆောင် တစ်ယောက် ဟင်းစားရှာတာ နေခင်းထိ ရောက်သွားတာ။ ဟင်းစားလည်း လုံလုံလောက်လောက် ရရော၊ အိမ်ပြန်ဖို့ ခြေဦးပြင်ပါတော့တယ်။
ရွာကို ပြန်တဲ့လမ်းမှာ သရက်ပင်ကြီးတွေ့တော့ နေကလည်း ပူတာနဲ့ သရက်ပင် အရိပ်အောက်ကို ခဏဝင်နားတယ်။ အဲဒီ သရက်ပင်ကလည်း ကျုပ်တို့ ရွာမှာ နာမည်ကြီးပဲ။ တောင်အင်တိုင်း သရက်ပင်လို့ ကျုပ်တို့ကတော့ ခေါ်တယ်။ တစ်ယောက်တည်းဆို သရက်ပင်နား သွားရဲတဲ့လူ သိပ်မရှိဘူး။ ညဘက် မပြောနဲ့။ နေ့ခင်းဘက်တောင်မှ အဲဒီ သရက်ပင်က သရဲ ခြောက်တယ်ဗျ။ ဘကြီးတင်ဆောင် ရောက်သွားတဲ့အချိန်က နေမွန်းတည့်လောက် ဖြစ်နေပါပြီ။
ဘကြီးတင်ဆောင်က သရက်ပင်ကြီးအောက် အေးအေးဆေးဆေး ဝင်ထိုင်ရင်း အမောဖြေနေတုန်း၊ သူနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်း သစ်ကိုင်းက လေမတိုက်ဘဲနဲ့ တဝုန်းဝုန်း ထမြည်ပါလေရော။ အဲဒါနဲ့ ဘကြီးက လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ …. အမလေးဗျာ … သရဲကြီးက သရက်ကိုင်းပေါ်မှာ ထိုင်နေတာ … ဆေးလိပ်ကြီးလည်း ဖွာလို့ …။ အဲဒီလိုလည်း တွေ့လိုက်ရော ဘကြီးတင်ဆောင်က မကြောက်တတ်တဲ့ လူဆိုတော့ သရဲကို “ဟေ့ကောင် … မင်း ခြောက်နေလို့လည်း အပိုပဲ။ ငါက မကြောက်တတ်ဘူးကွ၊ မင်းဟာမင်း နေ” လို့ အေးအေးပဲ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ကျုပ်သာဆို … ကြောက်လွန်းလို့ တစ်ခါတည်း အသက်ပါ ထွက်သွားနိုင်တယ်။ အဲ့လောက်ထိ သတ္တိရှိတာ …။ ဤကား စကားချပ်။
ဘကြီးက သရဲကို အဲဒီလို ပြောလိုက်ပေမယ့် သရဲက မလေးမခန့်နဲ့ ဆေးလိပ်ကြီးကိုတောင် ထပ်ဖွာပြလိုက်သေးတယ်။ ဒီအခါ ဘကြီးတင်ဆောင်က သူ့ကို အဲဒီလို လုပ်ရမလားဆိုပြီး “နေဦး၊ နေဦး၊ မင်းတော့ နေနှင့်ဦး၊ မင်း ငါ့အကြောင်း မသိသေးဘူး ထင်တယ်” ဆိုပြီး သရဲကို ကြည့်နေရင်းနဲ့ သရဲကို ပစ်ပေါက်ဖို့ ကျောက်ခဲကို လက်နဲ့ လိုက်စမ်းတယ်ဗျ။ စမ်းလို့လည်း မရရော၊ ဟိုဟိုသည်သည် ကြည့်လိုက်တော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ကျောက်ခဲ တစ်လုံးတွေ့ရော။ ဒါနဲ့ အဲဒီ ကျောက်ခဲကို သွားကောက်ပြီး သရဲကို ပေါက်မယ်လည်း လုပ်လိုက်ရော။ ဘကောင့်သား သရဲက ပျောက်သွားရောဗျာ။
သရဲလည်း မမြင်ရော ဘကြီးက သရဲထိုင်တဲ့ သရက်ကိုင်းကို စိတ်တိုတိုနဲ့ ပေါက်ချလိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဘကြီးတင်ဆောင် ရွာပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်ပြောရရင်တော့ ဘကြီးတင်ဆောင် အဲဒီ သရက်ပင်က အပြန်မှာ ခပ်လှမ်းလှမ်းလည်း ရောက်ရော မြေဇာခဲ (သဲခဲ) နဲ့ တိုက်မိလို့ လဲသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ အိမ်လည်း ပြန်ရောက်ရော ဖျားပါလေရော။ အဖျားက ကြီးလာတော့ အိမ်သားတွေလည်း ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိတာနဲ့ ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်ကို ညကြီးမင်းကြီး သွားပင့်ကြပါတယ်။
ဘကြီးက အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သူတွေ့ခဲ့ပုံတွေကို ပြောပြထားတော့ သရဲက ပြုစားထားလို့ ဖျားတာပဲ ဆိုပြီး ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်ကို သွားရောက် ပင့်ဆောင်ကြတာပါ။ ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်ရဲ့ လောကီပညာကိုတော့ “သိမ်ဝင်သပိတ်ကွဲနဲ့ အသက်ဝင်လာသော ဘီလူးအင်း” ဆိုတဲ့ ပို့စ်မှာ ကျနော် ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဆရာတော်လည်း ရောက်ရော ဘကြီးတင်ဆောင် ကိုကြည့်ပြီး သရဲက လဲတုန်း အပင်းထည့်လိုက်တာလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဆရာတော်က သူ့ပညာအစွမ်းနဲ့ ဘကြီးကို ကုပေးခဲ့ပါတယ်။
အထက်က အကြောင်းအရာတွေကတော့ ကျုပ်တို့ရွာက ဘကြီးတင်ဆောင်ရဲ့ သရဲကို နီးနီးကပ်ကပ် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတောင် သွေးမလန့်ဘဲ အကြောက်အလန့်မရှိ ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးပါပဲ။ ကျုပ်က အဲဒီလို ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့ သရဲတစ္ဆေ အကြောင်းတွေကို စိတ်ဝင်စားသလို အဲဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကိုလည်း ကိုယ့်ထက် ကြီးငယ်မဟူ မေးမြန်း စပ်စုခဲ့ပါတယ်။ ကျုပ်စပ်စုထားတာတွေကို ဒီနေရာက လူတွေကို ပြန်ရှဲတာပါပဲ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ ချင့်ယုံပေါ့ဗျာ။
ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါဂျောင်း ………….
This entry was posted in ကိုယ်တိုင်ရေး စာနှင့် ကဗျာများ and tagged သရဲ မကြောက်သူများ. Bookmark the permalink.
← WordPress install လုပ်ရန် အကောင်းဆုံး Free Hosting များ	တစ်မိနစ်အတွင်း အင်တာနက်ပေါ်က လုပ်ဆောင်ချက်များ →
Comment Here Cancel reply	Enter your comment here...
Recent Posts	၁၅၀၀ ကျပ်တန် MEC Tel mobile အင်တာနက် Settings
တစ်နှစ်တာ မှတ်တမ်း (၂၀၁၃)
Google ရဲ့ အကောင်းဆုံး Doodle Game (၃) ခု
Happy New Year 2014 3D Wallpapers Collection
Follow AnZarTone on WordPress.com